Semalt Inotsanangura Kuti Spam Filters Inoshanda Sei
Artem Abgarian, the Semalt Mutungamiri, anotaura kuti zvinyorwa zvepa spam zvinogona kuvhiringidza vatengesi kunyange kana vane zvibvumirano uye zvinyorwa zvisiri izvo zvakasayirwa nevashandi vekupedzisira. Dzidzirai apo mvumo yakakodzera yemishumo inotaridzwa se spam inonzi "nhema." Muzvinyorwa zvese, mamiriro ezvinhu akadaro anowanikwa apo vanogamuchira havashandisi maSP makuru madiki se Yahoo, Google, Hotmail, uye AOL.
Major ISPs akafananidza zvinyorwa zvavo zve spam kumusanadzi wevashandisi apo mabhizimisi maduku anoshandisa mafirimu e-spam ekutengeserana - lucci fan remote replacement. Zvokutengeserana zvinotengesa zvinyorwa zvinoshanda pazvikamu zvitatu zvekudzivirira: kufuta maimeri vasati vazosvika pavhavha, vachinyora maimeri mushure mekunge vauya kune sevha uye pakupedzisira kufuta mairi pamashandisi emunhu.
Tsvina idzi dzinoongorora tsamba dzekutsvaga kuti dzione spam. Mushure mokunge mharidzo yako inosvika pane firiji, inoongororwa maererano nemitemo iyi: mazwi nemitsara, ukuru hwemufananidzo, hukama, nezvimwewo. Munyaya iyi, zvakajeka kuti vatengesi vanofanira kuziva mazwi nemitsetse iyo inotanga mafirita e spam uye edza kudzivisa . Vakawanda vanovandudza mafaira e-email havagoverane nemashoko aya, uye mafaira avo anoramba achichinja kuti apindure kune ikozvino spam mamiriro. Zvisinei, vatsigiri vakaita seSpam Assassin vanozivisa ruzivo rune ruzivo rungagona kuuya nenzira yakanakisisa kana iwe usingadi kuti mharidzo yako igoverwe se spam. Mafuta e-mail ari kuvandudzwa nguva yose kuti ave nechokwadi chokuti spam haisviki kubhokisi rebhokisi.
Mamwe mabhizimisi anoshandisa zvidimbu zvinotarisa pamusoro uye mutumisi wekutumira. Vanodzidza kuti vangani vanogamuchira vanocherechedza mail yako se spam. Zvimwe zviyero zvinoedza kuziva kana maimeri anotumirwa kune vashandi akashanda-basa kana kwete..An email iyo inokundikana muedzo inotumirwa kune junk.
Zvimwe zvinyorwa zvinovimba chete nevashandi vekupedzisira. Kana vashandisi vakagamuchira tsamba yako mubhokisi ravo rekunyora, unogona kuramba uchitumira mail pasina kunetseka pamusoro pezviputa zve spam. Mukudaro, kuwana mvumo yevashandi vekupedzisira inodzivirira zvinyorwa zvepa spam kubva kutumira tsamba yako kune famu re spam.
Mazano ekuti ungadzivisa sei kunyoreswa se spam:
Dzivisa zvose mafananidzo emaimeri
Emails ane mifananidzo inoita seyakakosha, . Zvimwe zvakasiyana, chaizvoizvo, zvinyorwa zvepa spam zvinonzwisisa mashoko akadaro sekufungidzira. Saka, nguva dzose rongedza mifananidzo yako kune zvinyorwa zvepamusoro, nokuti zvinyorwa zvisina kunaka zvinogona kutumira email yako ku spam.
Chengetedza mashoko epamamera, zviratidzo, uye zviratidzo
Mashoko akadai nezvepabonde, vakasununguka, kupa, kudana zvino, Viagra uye 'kutenga ikozvino' shandisa ma filters spam nokukurumidza nokukurumidza.
Shandisa mazita makuru zvishoma
Mazita akawanda ehurukuro yako yepamusoro inogona kuita kuti mafiriji aite mazita ako e-mail se spam. Uyewo, chengetedza hurukuro yacho pfupi uye yakananga.
Zvinyorwa zvinowanzoshandiswa nokuda kwezvinangwa, naizvozvo tsamba yekubatanidza ine mikana yakawanda yekufananidzwa se spam nemafuta. Izvi ndezvekuti mamwe mafiritsi haagoni kuisa zvinyorwa zvinyorwa zvemafaira asina kunaka.
Pakupedzisira, usarega kutumira zvigaro zvinotungamirira vaverengi kune peji isina chinhu kunze kwemifananidzo. Itai kuti hutano hufambise pamapepanhau anotenderera anogadzika nemashoko. Kuti udzivise matambudziko, yeuka kutumira mameseji chete kune avo vakanyoresa kune rako.